Editor, Author at SPORTS MYANMAR - Page 881 of 937
ဆာကန်နီဒဲလ်ဂလစ်ခ်ျ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခြင်းဟာ လီဗာပူး ကြယ်ပွင့်တွေကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ ယာဂန်ကလော့
April 14, 2020 - by Editor
ယာဂန်ကလော့က လီဗာပူး ကစားသမား တွေဟာ ဆာကန်နီဒဲလ်ဂလစ်ခ်ျ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခဲ့တဲ့ အတွက် တကယ့်ကို အံ့အားသင့် ခဲ့ကြတယ်လို့ ၀န်ခံ လိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူး နည်းပြက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသင်းနဲ့ ပက်သက် ဆက်နွယ်တဲ့ ဟီးရိုး တစ်ဦးဆီ ရောက်လာ ခဲ့ခြင်းကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ကိုဗစ် – ၁၉ ကပ်ရောဂါဟာ …
လူငယ် ကစားသမားဘဝ တုန်းက ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ စီနီယာ နှစ်ဦး အမည်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ #ပေါ့ဂ်ဘာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ က သူဟာ လူငယ် ကစားသမား ဘဝ တုန်းက ယူနိုက်တက် ဂန္ဓဝင် ပေါလ် စခိုးလ် ၊ ဂျူဗင်တပ် ဂန္ဓဝင် ပီယာလို တို့ ဆီက ပညာတွေ …
လက်ရှိ အချိန် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အထွန်းတောက်ဆုံး ကြယ်ပွင့် ကစားသမားလေးက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ညာခံစစ် ကစားသမား ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က လက်ရှိ အသင်းဟောင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား လေး ဖြစ်တဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် က ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ အထွန်းတောက်ဆုံး ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ချီးကျူး …
ဘောလုံး ပရိသတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်း . . . . . စီးရီးအေ ကို ပြန်လည် စတင်တော့မည်
အီတလီ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဟာ လက်ရှိ စီးရီးအေ မှာ ကစား နေတဲ့ ဘောလုံး သမား အားလုံး ကို ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဆေးစစ်မှု တွေ ပြုလုပ် သွားတော့ မှာ ဖြစ်ပြီး ကစား သမား အားလုံး မှာ ရောဂါပိုး ကင်းစင် ပါက စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲ …
ဆေးရုံလှူတဲ့ ဒရော့ဘာ ၊ စပါးတို့ စိတ်ပြောင်းသွားမှုတွေနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဝန်ထမ်းတွေ ကို လစာမပေးဘဲ လျော့ချ ၊ ခွင့်ယူစေတဲ့ အသင်းတွေ ကို အရေးယူ သင့်တယ်လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က ပြောဆို ဝေဖန် အပြီး မှာတော့ စပါး အသင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်း လျော့ချရေး အစီအစဉ် ကို ပြောင်းပြန် လှန်ကာ အသင်း မှာ ရှိ …
အူဘာမီယန်း ပြောင်းရွှေ့နိုင်ချေ ရှိတဲ့ အသင်းသုံးသင်း နာမည်ကို ခန့်မှန်း ပြောကြား လိုက်တဲ့ နီကိုလပ်စ်
April 13, 2020 - by Editor
ဂန်းနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ချာလီ နီကိုလပ်စ် က တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်း ကို အသင်းမှာ ဆက်နေစေချင်ပေမယ့် ဂါဘွန်သားဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ ဂျူဗင်တပ်စ် တို့လို အသင်းကြီးတွေ ကမ်းလှမ်း လာပါက ထွက်ခွာ နိုင်ချေ ရှိကြောင်း သုံးသပ် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။ အသက် ၃၀ အရွယ် …
လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် မန်နေဂျာတွေထဲက ဘယ်သူ့လက်အောက်မှာ ကစားချင်သလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီနဗီး နဲ့ ဂျေမီရက်နက်
ဂယ်ရီနဗီးက လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် မန်နေဂျာ တွေထဲမှာ လီဗာပူး နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားချင်ဆုံးလို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး မန်စီးတီး နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ကလည်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး နည်းပြတွေ ထဲက တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ချီးကျူး သွားခဲ့ ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်းဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား …
ဘီလီ ဂီလ်မာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွိုင်ကိန်း ရဲ့ ချီးကျူးမှု ကို ထောက်ခံရင်း ၊ မန်ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် တဦး နဲ့ ဂီလ်မာ အကြားက တူညီချက် တွေကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ စကော့တလန် ဆယ်ကျော်သက် ကွင်းလယ်လူ တဦး ဖြစ်တဲ့ ဘီလီ ဂီလ်မာ ဟာ အခုလို ဘောလုံးပွဲ တွေ ယာယီ မရပ်နားထားခင်မှာ အထူး ခြေစွမ်း ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ချယ်လ်ဆီး အကယ်ဒမီထွက် တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂီလ်မာ ဟာ လီဗာပူး ၊ အဲဗာတန် …
ဗန်ပါစီ နဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း? ဘယ်သူ့ကို ပိုမိုနှစ်သက်သလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ အီဂါလို
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် စတား အိုဒီယွန် အီဂါလို က သူဟာ ရော်ဘင်ဗန်ပါစီထက် စာရင် ရူ့ဗန်နစ္စတယ်ရွိုင်းကို ပိုမို နှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး အကြောင်းရင်း ကတော့ နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ သူနဲ့ ကစားပုံ ဆင်တူ တာကြောင့်လို့ ရှင်းပြလိုက် ပါတယ်။ ဗန်နစ္စတယ်ရွိုင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ပီအက်ဗီ အသင်းကနေ ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းလာ ခဲ့သူ …
မက်ဆီ ရော်နယ်ဒိုတို့ အနက် ဘယ်သူ ပိုကောင်းသလဲ ဆိုတာ ဖြေကြားလိုက်ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ကစာသမား နှစ်ဦး
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး အစ်ဂ်ဟာလို နဲ့ ကွင်းလယ်လူ နီမန်ဂျာ မာတစ် တို့က စီ ရော်နယ်ဒို ဟာ ကစားသမား ဘဝ အတွင်း လီယွန်နယ် မက်ဆီ ထက် အလုပ် တွေကို ပိုမို ကြိုးစားခဲ့ ရကြောင်း ကိုယ်စီ သဘော တူညီ ခဲ့ကြ ပါတယ် …
အသင်းသား တယောက် လေ့ကျင့်ဖို့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကွင်း ကို ဖွင့်ထားပေးတဲ့ #ချယ်လ်ဆီး
လက်ရှိ ဥရောပ တဝှမ်း အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ တလွှား က လူသားတွေရဲ့ အသက် အန္တရာယ် ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဘောလုံးပွဲ တွေ ရပ်နားထားသလို ၊ လူစုလူဝေး ဖြစ်စေမယ့် အခြေအနေ တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်နေရပါတယ် ။ ဘောလုံးပွဲ တွေ ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ အတွက် …
ဘောလုံးပွဲ တွေ ဘယ်တော့ ပြန်စမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မေးဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ကို ခံထားရတဲ့ အင်္ဂလန် ရဲ့ နာမည်ကြီး ဘောလုံး ချန်နယ် ၂ခု
ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လ အတွင်း မှာ ဘောလုံးပွဲ တွေ ရပ်နားထားရခြင်း တွေ ဘယ်တော့ ပြန်စမလဲ ၊ ထိုကဲ့သို့ ရပ်နားထားခြင်း ကြောင့် ကစားသမား တွေ အပေါ် ဘာတွေ သက်ရောက်မှု ရှိမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ကို မိမိတို့ ချန်နယ် ရဲ့ …
Previous 1 … 880 881 882 … 937 Next